RASMI: Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa tababare Maurizio Sarri – Gool FM
(Italy) 16 Juunyo 2019. Juventus ayaa ku dhawaaqday in Maurizio Sarri ay u magacaawday macalinka cusub ee kooxda, wuxuuna badal u noqday macalinkii hore ee Massimiliano Allegri.
Bianconeri ayaa xaqiijisay in qandaraaska Maurizio Sarri uu gaarayo mddo saddex sano ah, wuxuuna ku egyahay 30-ka June 2022, iyadoo aan shaaca laga qaadin dhaqaale ahaan inta uu heli doono macalinka reer Talyaani.
Dhinaca kale maamulka kooxd Chelsea ayaa waxay shaaca ka qaadeen bixitaanka macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri, Naadiga reer Talyaani ayaa war rasmi ay soo qoreen waxay ku sheegeen.
“Wadahadaladii aan yeelanay kaddib finalka UEFA Europa League, wuxuu Sarri sharaxay rabitaankiisa ah inuu ku laabto dalkiisa hooyo”.
Yeelkadeeda, Maurizio Sarri ayaa go’aansaday inuu ka tago kooxda Chelsea bishii Maarso ee lasoo dhaafay.
Sarri ayaa la qaatay kooxda Chelsea xili ciyaareed guul ah, wuxuuna kula guuleystay koobka UEFA Europa League, isagoo sidoo kale Blues ku hogaamiyay in booska saddexaad ay kaga dhameystaan dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.